टिकटकमा रातारात भाइरल भएका सन्तोष पौडेल श्रीमतीसंग आएर खोले यस्तो बास्तबिक ? के हो सत्यता ? हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – Classic Khabar
August 29, 2021 120
आजभोली सामाजिक सञ्जालका कारण केही ब्यक्तिहरु रातारात भाइरल भइरहेका छन् । त्यस्तै मध्य एक हुन् सन्तोष पौडेल । उनका टिकटक प्राय श्रीमतीसंग सम्बन्धित हुन्छन् । आफुलाई श्रीमती पीडितका रुपमा प्रस्तुत गर्ने सन्तोष भन्छन् वास्तवमा म श्रीमती पीडित भने होइन । आफुले केही उदाहरण समाजमा देखेका कारण त्यसैलाई उतारेको बताउँछन् । उनले करिब १० वर्ष फिल्म क्षेत्रमा प्राविधिकका रुपमा काम गरेको अनुभव आफुसंग भएको बताउँछन् ।
उनले त्यो अनुभव आफुले टिकटकमा प्रयोग गरेको बताउँछन् । त्यसैले आफ्नो टिकटकमा पनि फिल्ममा कथा बोलेजस्तै बनाउने गरेको पनि बताउँछन् । टिकटक आउनु अघि म्युजिकलीमा पनि यसरी नै भिडियो बनाउने गर्थे । यद्धपी आफुसंग अभिनयको भने अनुभव भने नभएको बताउँछन् । उनले प्राविधिक क्षेत्रमा काम गरेको भएपनि अभिनयसंग सम्बन्धितहरुसंग लामो समय संगत भएका कारण पनि सजिलै गर्न सकेको बताउँछन् ।
उनले टिकटक खाता बनाएको धेरै भएको छैन । अघिल्लो लकडाउन सुरु भएपछि मात्र उनले टिकटक बनाउन थालेको बताउँछन् । झण्डै डेढ बर्षको अवधिमा उनले बनाएका टिकटक भने निकै भाइरल भएका छन् । श्रीमतीलाई पनि टिकटकमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । तर आफुलाई श्रीमती पीडितका रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन्छन् । तर त्यसो होइन उनी भन्छन्, हामी संगै बस्न थालेको ३३ वर्ष भैसक्यो । त्यसैले हामीबीचमा निकै राम्रो समझदारी छ ।
उनीहरुको विवाह पनि अनौठो तरिकाले भएको थियो । त्यसवारे श्रीमतीले वास्तविकता खुलाउँदै भनिन्, चिया खाएर सक्दा सम्म मलाई जवाफ दिनुपर्छ भनेर चिया खान थाल्नुभयो । म तँलाई मन पराउँछु यो चिया खाँदा सम्म मलाई जवाफ चाहियो भनेपछि मैले पनि माया गर्छु भने म डराएरै भनेकी थिएँ ।
Prevचर्चित हास्य टेलिसिरियल मेरि बास्सैबाट चर्चामा आएका कलाकार दमन रुपा खेति लाई पित्रीशोक, पशुपति आर्यघाटमा यसरी गरियो अन्तिम दाहसंस्कार (भिडियो)
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र १३ गते आईतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
प्रहरीले यसरी सार्वजनिक गर्यो संखुवासभाका मुख्य आरोपीलाई (भिडियो सहित)